Faah faahin:- Gaari ay saarnaayeen koox ciyaartooy ah oo lagu rasaaseeyay gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Gaari ay saarnaayeen koox ciyaartooy ah oo lagu rasaaseeyay gobolka Sh/hoose
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qasaare geystay oo xalay lagu qaaday gaari ay la socdeen ciyaartooy ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Elman iyo macalinka labaaad ee ciyaartooyda kooxda Bariga Dhexe, xilli ay marayeen inta u dhaxeeysa deegaanka Calamada iyo Xaawo-Cabdi ee gobolka Sh/hoose.
Weerarkaasi ayaa la sheegayaa inuu ku geeriyooday Yuusuf Xeydar Cali oo ahaa macalinka labaaad ee ciyaartooyda kooxda Bariga Dhexe, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay labo ciyaartoy kale oo lagu kala magacaabo C/laahi Maxamed Mayoow iyo Cumar Muumin Daahir.
Labadaasi ciyaartooy oo ka tirsan kooxda ELMAN ayaa soo gaaray dhaawac aad u culus, waxaana la sheegayaa in dhaawacooda haatan la geeyay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho, halkaas oo qaliin loogu sameeynayo.
Gaariga ay la socdeen ciyaartooydaasi ayaa la sheegayaa inuu kusii jeeday degmada Afgooye, kadib markii uu kasoo amba-baxay magaalada Muqdisho, waxaana xilliga la weeraray ay marayeen inta u dhaxeeysa deegaanka Calamada iyo Xaawo-Cabdi ee gobolka Sh/hoose.
Illaa iyo haatan lama oga cidda sida rasmiga ah uga dambeysay rasaastaasi lagu furay gaariga ay la socdeen ciyaartooydaasi, iyadoona sidoo kale aysan jirin cid sheegatay ama loo soo qab-qabtay weerarkaas.